Xafiiska Wakaalada Qurbajoogta DDSI oo Loo Magacaabay Cabdi-Bari. | Salaan Media
Jigjiga(SM) Arbaco April 03,2013.waxaa loo magacaabay xilka xafiiska wakaalada qurbajoogta DDSI mudane Cabdi-bari oo agaasin ka ahaa xafiiska caafimaadka DDSI,xafiiskan oo intii loo bedalay maareeyihii hore u hayn jiray Xarunta XDSHSI ayaa ay todobaadyo ay cakirnayn socodsiinta hawlihii shaqo ee uu xafiiskani u xilsaarnaa walow uu wasiirka madaxtooyada DDSI uu maalmihii danbe culays saaray sidii ay u kala socon lahaayeen hawlaha shaqo ee loo idmay xafiiska qurbajoogta ddsi.
hadaba mar aanu la xidhiidhnay qaar ka mida Shaqaalaha xafiiska caafimaadka DDSI ayaanu wax ka waydiinay in ay wax nooga taabtaabtaan bal comitmentiga shaqo iyo ka go’naanshaha isxilqaanka Shaqo ee Cabdi bari sida uu ahaa,kuwaasoo noo sheegay in Cabdi-bari xiligii uu ka shaqaynayay xafiiska caafimaadka DDSI uu ahaa nin karti iyo firfircooniba u lahaa fulinta waajibaadkiisa shaqo si hufana u bixin jiray adeega shacabka. Masuulkan ayaa loo rajaynayaa in xilka iyo waajibaadka loo magacaabay in uu si xilkasnimo,wadaninimo,eex la’aan,ka madax banaan musuq iyo ka go’naansho adeeg-bixinta shacabka uu u gudan doono.
isku soo wada duuboo Wakaalda Qurbajoogta DDSI ayaa loo magacaabay masuul cusub oo lagu magacaabo cabdi-bari,sidaas darteedna wixii hada ka danbeeya ay kala soo xidhiidhi doonaan danaha ay ka leeyihiin xafiiska Qurbajoogta,idinkoona kala soo xidhiidhi doona mobileka gacanta oo uu numbarkiisu yahay 251915330167.